"Romantic Tower": imvelo, ichibi nombono emangalisa.
I-FARM HOLIDAYS VILLAGE yethu iyisici sendlu encane yekhulu le-17 lonke elizungezwe izingadi ezinkulu ezizimele ezine-POOL ebukekayo ne-solarium ebheke ezintabeni.
Itholakala endaweni emaphakathi yesifunda sase-Abruzzo, ephakathi kwezintaba eziphakeme ezimbili ezinkulu ze-NATIONAL PARKS eYurophu ("Majella" kanye "ne-"Gran Sasso"), kuyimizuzu engama-30 kuphela ukusuka EMABHESHI nasemadolobheni abalulekile nezinkonzo.
Ababungazi bazi kahle futhi bayayithanda indawo yabo futhi bahlala betholakala ukuze baphakamise izindlela zohambo enziwe abasiki bengqephu.
--- agriturismo "Borgo Madonna degli Angeli" - Indawo yokuhlala nedolobhana ---
Ngaphakathi kwe-"Borgo" yethu encane yangasese KUNEZINKULU EZENGEZIWE EZIQASHWAYO ezinosayizi nezinhlobo ezahlukene: Ezincane, Ezimaphakathi nezinkulu, kusukela kubantu abangu-2 kuya kwabangu-4, ngalinye linethuba lemibhede eyengeziwe (ngolwazi olwengeziwe ungabona ngaphakathi. le ngosi yewebhu, ungasithola sifuna amadolobhana ase "Tocco Da Casauria" noma "Torre De' Passeri", noma sicela usibuze ngqo).
Wonke amafulethi ahlinzeka nge-PRIVACY eningi, ivulekile, inomnyango wangasese kanye nengadi enoveranda (noma ithala) ukuze isetshenziswe ngokukhethekile lapho ungajabulela khona ukuphumula ngenkululeko ephelele noma udle ngokubuka kwe-panoramic epaki lethu nasezintabeni eziseduze.
I-APARTMENT EMNCANE "Romantic Tower":
Amakamelo amabili - 30 sq.m, anemibhede engu-2 esitezi sokuqala (igumbi lokulala eliphindwe kabili, noma amabili angashadile) kanye nethala elincane elibheke engadini enkulu emaphakathi, kuyilapho phansi kunegumbi lokuhlala elincane elinekhishi kanye nombhede usofa. izingane (1,70 m. ubude) + indlu yokugezela eneshawa. Ngaphandle kunompheme omuhle futhi omboziwe othize, onetafula nezihlalo kanye nengadi encane engaphambili ebheke epaki elikhulu elizungeze isakhiwo.
Isakhiwo sayo esiyindilinga esimise okwenqaba asijwayelekile, njengoba kwake kwaba yizisele zangaphambili zokugcina utshani. Ifakwe ngezinto zakudala ezivela esifundeni sase-Abruzzo nomsebenzi wezandla ojwayelekile. Kungase kungabi ntofontofo kakhulu kubantu abanezinkinga zokuhamba ngenxa yezitebhisi zasendlini eziphakeme eziletha ekamelweni (ezifana nalezo ongazithola emikhunjini), kodwa ziyathandeka kakhulu futhi zothando, ngakho zifaneleka kakhulu kubantu "abancane". . Wonke amanye amafulethi aphansi. I-air conditioning system (enemali eyengeziwe uma isetshenziswa) + i-microwave (ngaphandle kwazo zonke izinsiza zokupheka). Ebusika kukhona isitofu esivuthayo sokhuni esinefasitela lesingilazi, ngaphezu kokushisa okujwayelekile (ama-radiators).
KULABO ABAFUNA UKWAZI OKWENGEZIWE...
- AMAHOLIDE WASEPULAZINI NENDAWO: I-agriturismo yethu inepaki elikhulu kakhulu elingamahektha ama-3 (amahektha ayi-7,5) elizungeze amakotishi aseduze angu-2 kanye noMbhoshongo owodwa omncane ngaphakathi kwalo, ngaphezu kwepulazi elikhulu nxazonke (elikhiqiza imivini yendawo, amafutha omnqumo neminye imikhiqizo ejwayelekile). Indlu enkulu iyisakhiwo esingokomlando kusukela ngeminyaka yawo-1600, kwakungeyomndeni ngokwawo. Ibonakala ngamakhothamo athile amaMoor kanye nomkhathi oyiqiniso, izungezwe ama-menhir ayigugu asekuqaleni kanye nezingcezu ezincane zamakholomu enkathini yamaRoma, womabili avela endaweni uqobo (okubuye kube isizinda esincane semivubukulo). Zonke izikhala ezingaphakathi kwaleli dolobhana lezwe, ezinikezwe izinto zokusebenza ezimbalwa zangaphandle, ziyisicaba futhi zigcwele izitshalo, utshani nezimbali ezijwayelekile zesimo sezulu sethu saseMedithera, ngaphandle kwazo zonke izindawo ezingaphandle ezikhanyisiwe nezibani ze-scenographic. Okunye okukhangayo ngaphakathi kwendlu yethu yasepulazini kunikezwa izilwane ezifuywayo ezinobungane ngempela nezilwane zasemapulazini ezincane, ezihlala zihamba ngokukhululeka epaki futhi zihlale zifuna ukutotoswa ... futhi mhlawumbe nokudla!
- IZINKONZO EZIJWAYELEKILE NENDAWO YOKUDLA: nakuba zingekude kwenye indawo (ilungele amaqembu futhi), wonke amafulethi abugcina kahle ubumfihlo bawo, izikhala zabo kanye nezomuntu siqu. Endaweni evamile kunezindawo zamahhala njengamachibi amabili amancane kodwa abukekayo (abheke izintaba eziseduze), ane-solarium enkulu ehlomele futhi enethezekile yokujabulela ilanga nokuphumula endaweni epholile. Yonke indawo kukhona ukuxhumana okuhle kwe-Wi-fi yamahhala (futhi ngaphakathi kwawo wonke amafulethi). Ngaphandle kwevulandi/ithala kanye nezingadi ezincane phambi kwefulethi ngalinye, kunezindawo eziningi ezingaphandle ezinkulu ezingasetshenziswa ngokujwayelekile nxazonke, ezilungele ukufunda noma, uma uthanda, ukuhlangana nabantu. Phakathi kwalezi zindawo zokuhlala ezinkulu ezinomtapo wezincwadi omncane ohlomele ukuphumula, kanye nesakhiwo esikhulu esibukekayo esiqinile esinesitayela samaMoor esinethenisi yetafula, itafula lebhola nokunye. Eceleni kwayo sinezinkundla ze-volleyball ezimbili namabhayisikili asezintabeni (aqashiwe). Futhi lezi zindawo zikhanyiswe kahle kakhulu, ukuze zisetshenziswe kusihlwa. Imishini yokuwasha emibili esetshenziswa okuvamile isendaweni engaphandle (kanye nemi-2 yomuntu siqu ngaphakathi kwamafulethi amakhulu).
- INDAWO ENGAMASU: siseduze kakhulu nezintaba eziphakeme nezisendle zamapaki amabili Kazwelonke (acebile kakhulu ngomlando nemvelo), kodwa imizuzu engu-30 nje ukusuka emabhishi (imizuzu engu-40. ukufika ku-2 Marine Reserves), isigamu sehora ukusuka ePescara (idolobha elikhulu lezentengiselwano nelabavakashi), nesikhumulo sezindiza saso samazwe ngamazwe (izindiza ezimbalwa ezibiza kancane zezindawo ezinkulu zase-Europe), kanye ne-1.5 h. ukuya eRoma (ilungele ukuhamba kosuku olulula - ngisho nethuba lamabhasi aqondile athatha amahora angu-2 futhi abiza i-11 € kuphela). Ngaphezu kwalokho nje imizuzu embalwa ukusuka ezindaweni zokudlela (ngamanani avunyelwene - eyokuqala ngamamitha angama-350 kuphela!), Izitolo ezinkulu (ezisuka kumamitha angama-600) nezitolo futhi ezingekude namadolobhana asendulo. Ngakho-ke indawo iyindawo ekahle yalabo abathanda ukuhamba ngezinyawo emvelweni noma emabhishi, bavele baphumule endaweni emnandi nemukelayo, noma bajabulele ukudla okukhethekile kwe-Abruzzo' newayini kanye nezikhungo zayo zomlando ezingenakubalwa.
- USIZO LWEZIVAKASHI: elinye iphuzu lethu elingcono kakhulu ulwazi olujulile lwendawo kanye nolwazi lomuntu siqu lwabavakashi esithanda ukulunikeza amakhasimende ethu “afuna ukwazi” ukuze “athole kangcono lesi sifunda esingaziwa nesiyiqiniso”. Ezivakashini zethu kukhona nomtapo wolwazi ophelele kakhulu onezincwajana ezimbalwa, amamephu emigwaqo namamephu ohambo ngezilimi eziyinhloko. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze uzizwe usekhaya!
Ngokwanoma iziphi EZENGEZIWE, uma kudingeka (ukushisisa, isimo somoya, imibhede eyengeziwe, njll.) kanye/noma izaphulelo sicela ubheke ngezansi "Ezinye Izinto okufanele uziqaphele".
I-Abruzzo ibizwa ngokuthi "iNdawo Ehlaza YaseYurophu" ngenxa yamapaki ayo amaningi Kazwelonke kanye Nezindawo Ezivikelwe Ezivikelwe, ezinothile kwezinhlobonhlobo zemvelo nezindawo: ukusuka ezintabeni eziphakeme kuya emabhishi ngemizuzu engama-30 nje, egcwele amadolobhana athakazelisayo nezikhumbuzo zenkathi ephakathi, kodwa futhi ibanga elifushane ukusuka emadolobheni abalulekile anezikhumulo zezindiza kanye nezinsizakalo ezihlukahlukene, i-gastronomy ecebile kakhulu (kusukela emikhiqizweni yasezintabeni kuya ezinhlanzini, evame ukuxuba kokubili) kanye namasiko asendulo kanye nobuciko obulondolozwe ngomona yi-"Genti d'Abruzzo" yethu.
Silungile “enkabeni ye-Abruzzo”, esihlinzekwa yimigwaqo emihle kakhulu futhi sisesimweni esihle sokusebenzisa ngokunenzuzo zonke lezi zinhlinzeko ezinhle kanye namathuba amaningi. Ngakho-ke, nathi ungashintsha kalula usuka ekuvakasheni kwezintaba uye kowolwandle, uhambe emizaneni yethu yasendulo, uqeqeshe imidlalo eminingi emvelweni, kodwa futhi ujabulele isiko, i-gastronomy ejwayelekile namasiko asendulo ... noma, kulabo abafuna vele uphumule epaki lethu elizimele elibanzi nelihlomele elinezindawo zokubhukuda nezokungcebeleka futhi ujabulele izindawo zothando nezinhle!
Umndeni wethu ubulokhu usebenzelana namasiko nentuthuko yendawo isikhathi eside futhi sizohlinzeka ngakho konke ukuthanda kwethu nolwazi ukuze sikwenze nawe uthandane no-Abruzzo!
Indawo, yonke iyisicaba, ngaphezu kwepaki engamahektha angu-3 (7,5 acres), izungezwe indawo yasemaphandleni engamahektha ayi-10, enezihlahla zomnqumo ezindala, izivini, izinkuni nokunye. Epaki kukhona nenja emnandi kakhulu (i-Golden Retriever) enamakati, izinkukhu namapigogo, izimbuzi, izimvu kanye ... nembongolo ... "inkosi yangempela" ye-agritourism.
SIKHULUMA ISIZULU, ISI-ITALIAN ... et nous parlons aussi un peu de FRANÇAIS !
Iminyaka engu-40 siphathe Amaholide Epulazi ngothando futhi njengomsebenzi wethu wochwepheshe, esinikezela kuwo ngaso sonke isikhathi. Siyaziqhenya ngokwamukela isivakashi sethu endaweni yakudala yomndeni yekhulu le-17 futhi sibeka injabulo etholakala ezivakashini ngolwazi lwethu nolwazi, ngaphandle kwemihlahlandlela ehlukahlukene kuzo zonke izilimi eziyinhloko, ukuze sizijwayeze ezokuvakasha ezenziwe ngokwezifiso ("i-talor made"). . Yize sibuhlonipha kakhulu ubumfihlo bezivakashi zethu kanye nesidingo sazo sokuphumula futhi "bajabulele izindawo zabo" ...
Iminyaka engu-40 siphathe Amaholide Epulazi ngothando futhi njengomsebenzi wethu wochwephes…